profit fall(profit fall) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
सांग्रीलाको नाफा घट्यो, केही सूचक कमजोर बने
काठमाण्डौ । सांग्रील डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्म ३२ करोड ७६ लाख बढी खूद नाफा आर्जन गरेको छ । यो भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा थोरै नाफा हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३४ करोड ७७ लाख नाफा आर्जन गरेको छ । कर्मचारी तथा संचालनतर्फको अत्यधिक खर्च तथा उच्च ब्याज खर्चले यो बैंकको नाफा घटेको...
प्रतिस्पर्धीको तुलनामा किन कमजोर देखियो देवः विकास बैंक ?
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्तरका अधिकांश विकास बैंक(आफ्ना प्रतिस्पर्धी)हरुले उत्साहप्रद वित्तीय विवरण पस्किरहेको बेला देवः विकास बैंकले भने नाफा घटेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार यो बैंकले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्म २७ करोड ५३ लाख मात्र खूद नाफा आर्जन भएको छ । अघिल्लो...
गुड्विल फाइनान्सका प्रमुख सूचकमा पहिरै पहिरो !
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासमा गुड्विल फाइनान्सका प्रमुख बित्तीय स्वस्थता दर्शाउने प्रमुख सूचकहरुमा पहिरै पहिरो गएको छ । यो कम्पनीको खूद नाफादेखि खूद ब्याज आम्दानी, संचालन मुनाफा हुँदै जगेडाकोषमा समेत पहिरो गएको देखिएको हो । कम्पनीले यो अवधिमा २ करोड ७० लाख नाफा आर्जन गरेको छ, अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ५ करोड ८६ लाख...
आइसीएफसी फाइनान्सको अवस्था धराप, मन बुझाउने ठाउँ कतै छैन !
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म आउँदा आइसीएफसी फाइनान्स धराप बनेको छ । यो कम्पनीका कुनै पनि सूचक त्यस्ता आशालाग्दा छैनन्, जसलाई हेरेर लगानीकर्ताले चित्त बुझाउन सकून् वा आशावादी बन्न सकून् । समीक्षा अवधिमा यो कम्पनीको खूद नाफातर्फ ५३ प्रतिशत भन्दा बढीले पहिरो गएको छ भने संचालन मुनाफा पनि ४१ प्रतिशतले घटेको छ...
ग्रामीण बैंकको नाफा र ब्याजआम्दानीमा पहिरो, खराब कर्जाको थुप्रो
काठमाण्डौ । नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको नाफामा ठूलै पहिरो गएको छ । चालुु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा यो बैंकको नाफा ९ करोड ७९ लाखमा सीमित बन्न पुुगेको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा बैंकको नाफा १८ करोड ३ लाखको उचाईमा थियो । बैंकको खूद ब्याज आम्दानी, संचालन नाफामा समेत उस्तै पहिरो गएको छ । अघिल्लो वर्ष ५० करोड रहेको खूद ब्याज आम्दानी घटेर...
नाफा घटेर रिजर्बमा छलाङ मारेको सिन्धु बैंकको प्रगतिलाई कसरी बुझ्ने ?
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा सिन्धु विकास बैंकको नाफा पनि घटेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा १ करोड ३८ लाख रहेको बैंकको नाफा घटेर १ करोड १० लाखमा सीमित बन्न पुगेको हो । बैंकले रिजर्बकोषमा छलाङ मारे पनि निक्षेप, खूद ब्याज आम्दानी र प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा ४ करोड ६५ लाखमा सीमित रिजर्ब कोष बढेर ८...
मेरो माइक्रोफाइनान्सको खराब प्रदर्शन: नाफा, रिजर्ब र इपीएसमा गिरावट
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा अधिकांश वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले राम्रो प्रगति गरिरहेको बेला माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरु भने नाफामा गिरावटको मार व्यवहोरिरहेका छन्। यहीकारण बजारमा महङ्गो मूल्यमा किनबेच भइरहेका माइक्रोफाइनान्सहरुको बित्तीय विवरण खराब देखिएको छ । मंगलबार आफ्नो अपरिस्कृत वित्तीय विवरण...
एनआइसी एशिया मजबुत कि कमजोर ? हेरौं नालीबेली
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले चालु आ.व. २०७४/७५ को दोस्रो त्रैमासिकमा सम्भावित नोक्सानी अघिको सञ्चालन मुनाफामा २५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । बैंकले गत वर्षको सोही अवधिको रु.०.८९ अर्ब मुनाफाको तुलनामा चालु वर्ष रु.१.१२ अर्ब सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको हो । सञ्चालन मुनाफाले उक्त संस्थाले आफ्नो मुख्य सञ्चालन कारोवार...
धराशायी बन्दै माछापुच्छे बैंक, अधिकांश सूचकमा पहिरो
काठमाण्डौ । माछापुच्छे बैंकको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । यो बैंकको प्रमुख बित्तीय सूचकमा पहिरो गएका कारण अवस्था खस्कदै गएको हो । सोमबार प्रकाशित दोश्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा अधिकांश सूचकहरुमा ठूलो गिरावट आएको देखिएको छ । यो बैंकको खूद नाफा, संचालन नाफा, रिजर्ब कोष, खूद ब्याज आम्दानी, इक्वीटीमा प्रतिफल लगायतमा ठूलो...
कमजोर बन्दै बीओके, प्रमुख सूचकहरुमा पहिरो !
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू लिमीटेड पछिल्लो समय धराशायी बन्दै गएको देखिएको छ । यो बैंकले आइतबार प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा यस्तो अवस्था देखिएको हो । बैंकले प्रकाशित गरेको विवरणमा उसको खूद नाफा, संचालन नाफा, खूद ब्याज आम्दानी तथा प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । अघिल्लो वर्ष...
पोखरा फाइनान्सको अधिकांश सूचक खराब
काठमाण्डौ । निकै कमजोर बन्दै गएको पोखरा फाइनान्सले दोश्रो त्रैमासमा समेत खराब नतिजा निकालेको छ । यो कम्पनीका अधिकांश मुख्य सूचकहरुमा पहिरो गएको देखिएको छ । खूद नाफा, खूद ब्याज आम्दानी, संचालन नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी लगायतका मुख्य सूचकमा पहिरो गएको हो । ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको नाफा घटेर ४ करोड ३ लाखमा सीमित बन्न पुगेको छ भने ९ करोड...
धराशायी बन्दै एनबी बैंक, महत्वपूर्ण सूचक बिग्रदा लगानीकर्ता निराश
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंकको अवस्था थप धराशायी भएको छ । पहिलो त्रैमासमा कमजोर वित्तीय विवरण पस्किएको यो बैंकको दोश्रो त्रैमासको अवस्था सुधार हुनको साटो थप बिग्रिएको हो । नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले नेतृत्व गरेको बैंकले दोश्रो त्रैमासमा केही सुधारको आशा गरेर बसेका लगानीकर्तालाई निराश...
मर्जरपछि एनसीसी बैंक किन यति कमजोर ?
काठमाण्डौ । चारवटा राष्टिय स्तरको विकास बैंकको मर्जरपछि दोश्रो त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको एनसीसी बैंक कमजोर देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा २४ करोड ६८ लाख खूद नाफा कमाएको यो बैंकले यो वर्षको सोही अवधिमा ७ करोड ७६ लाख मात्र खूद नाफा आर्जन गरेको हो । तर व्यवसाय बिस्तार भएका कारण खूद ब्याज आम्दानीतर्फ पनि १...
किन घट्यो रिलायवलको खूद नाफा ?
काठमाण्डौ । रिलायवल माइक्रो फाइनान्स बित्तीय संस्था लिमीटेडको खूद नाफा घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा खूद नाफा ३८ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको हो । कम्पनीले मंगलबार प्रकाशित गरेको बित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा ९९ लाख ४७ हजार खूद नाफा आर्जन भएकोमा यो वर्ष...